16525 पटक पढिएको
कुनै पनि सम्बन्धमा गाढापन र आनन्द अनुभूति आवश्यक हुन्छ । पुरुषहरूले दिनमा कैयन पटक यौन सम्पर्कको आनन्द लिन चाहन्छन् भन्ने भनाइ एकातिर छ भने अर्कातिर महिलाहरू पनि पुरुषले नै जस्तै आनन्द प्राप्त गर्छन् । तर, सबैभन्दा ठूलो रहस्य भने महिला वा पुरुष कसले रति क्रियामा सबैभन्दा बढी आनन्द उठाउँछन्? यो प्रश्नका उत्तर पढेर तपाईलाई पनि आश्चर्य लाग्न सक्छ ।
ईन्द्रले आफ्नो रिस प्रकट गर्नका लागि ती राजालाई दण्ड दिन चाहे । एक दिन ती राजा शिकारमा जाँदा ईन्द्रले उनलाई सम्मोहित गरिदिए । राजा भङ्गस्वाना वनमा यताउता अलमलिन थाले । सम्मोहित अवस्थामा उनले सबै होस गुमाए, उनलाई न त दिशाहरूबारे कुनै सम्झना थियो, न त आफ्ना सैनिकहरू नै देखिरहेका थिए । भोक प्यासले उनलाई आकुल–ब्याकुल बनाइ दिएको थियो । अचानक उनले एक सानो नदी देखे, जुन कुनै जादूजस्तो अत्यन्तै आकर्षक देखिइरहेको थियो । राजा त्यो नदीका तर्फ अघि बढे र उनले पहिले आफ्नो घोडालाई पानी पिलाए अनि आफैले पनि पिए ।
ईन्द्रले भड्काइ दिएपछि सबै दाजुभाइहरू आपसमा नै लड्न थाले, एकअर्कालाई मार्न थाले । यो कुरा भङगस्वानालाई थाह भएपछि उनी शोकाकुल हुन पुगे । ब्राह्मणका ईन्द्र तिनी भएका ठाउँमा पुगे र सोधे कि उनी किन रोइ रहेकी छिन्? भङ्गस्वानाले रुँदा रुँदै पूरै घटना ईन्द्रलाई बताइदिइन, त्यसबपत ईन्द्र आफ्नो वास्तविक रूपमा आए र राजालाई तिनका गल्तीका बारेमा ज्ञात तुल्याए ।